टरिगाउ र सक्सेस हिरा डाँगी स्मृति कपको फाईनलमा भिड्ने « Chhahara Online
टरिगाउ र सक्सेस हिरा डाँगी स्मृति कपको फाईनलमा भिड्ने
लक्ष्मण बस्नेत दाङ - १५ कार्तिक २०७८, सोमबार
टरिगाउ युवा क्लब तुलसीपुर १२ र सक्सेस फुटबल क्लब तुलसिपुर ९ दाङको तुलसीपुरमा जारी सर्वाधिक पुरस्कार राशीको प्रथम हिरा डाँगी स्मृति कप खुला फुटबल प्रतियोगिता २०७८ को उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन् !
हिरा डाँगी फाउन्डेसन तुलसीपुर ५ को आयोजनामा संचालित प्रतियोगिताको फाइनल खेल मंगलबार दिउँसो दुई बजे हुनेछ । सक्सेस फुटबल क्लबले आईतवार सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा युएनबिसी घोराही लाई सुन्यका विरुद्ध दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । त्यस्तै आज सोमबार सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा साहारा क्लब लखनउ लाई सुन्यका विरुद्ध चार गोलको फराकिलो अन्तर ले पराजित गर्दै टरिगाउले सक्सेस संगको फाईनल भिडन्त पक्का गरेको हो ! उल्लेख्य दर्शकले खचाखच भरिएको अरनिको खेल मैदान तुलसिपुरमा भएको खेलको १२ औ मिनेटमा टरिगाउका जर्सी न ११ का खेलाडी चेतन कडायतले पहिलो गोल गरे । साहारा लाई सुरुवाती अवस्थामा दबाबमा राख्दै शानदार प्रदर्शन गरेको टरिगाउका तर्फबाट जर्सी न ९ का अर्जुन नेपाली ले ३७ औ मिनेटमा थप एक गोल गरे ।
खेलको सुरुवाती अबस्था देखिनै दबाबमा रहेको साहाराले आफ्ना थुप्रै गोल गर्न सक्ने अबसर गुमाउदा खेलको ७१ औ र ७९ औ मिनेटमा जर्सी न ११ का चेतन कडायतले थप दुई गोल गर्दै टिम लाई ४-० को जित दिलाउन सफल भए ! खेल अबधिभर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने चेतन कडायत पहिलो गोलकर्ता संगै म्यान अफ द म्याच भए । उनले नगद ३५ सय र ट्रफी हात पारे ।
उपाधी होडमा रहेका दुबै टिममा सशक्त र शानदार प्रदर्शन गर्ने खेलाडिको वर्जश्व रहेकाले फाईनल खेल कडा प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
कार्तिक १० गते बाट जारी प्रतियोगितामा १० टिमको सहभागिता रहेको छ ।
यसैबिच आयोजकले मंगलबार हुने फाईनल खेल तथा प्रतियोगिताको समापन समारोहमा उपस्थितिका लागि खेलप्रेमी,खेलाडी, उधोगी, ब्यबसायी,पत्रकार लगाएत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।